ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: September 2010
The Guoliang Tunnel in Taihang mountains (China)
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဂိုလျန်းလှိုဏ်ဂူ ကားလမ်း...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဂိုလျန်းလှိုဏ်ဂူကားလမ်းဟာ ထိုဒေသရှိကျေးရွာတစ်ရွာမှရွာသားများကိုယ်တိုင် အပင်ပန်း
ဆင်းရဲခံကာတည်ဆောက်ခဲ့ သည့် ဂုဏ်ယူအားကျဖွယ် အလွန်းကောင်းသည့် ကမ္ဘာ့ အံ့ ဖွယ် တောင်ပတ်
၁၉၇၂ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ ကျောက်တောင်နံရံပေါ်မှာ ထွင်းထုဖောက်လုပ်ထားတဲ့ လမ်းလေးတစ်ခုသာ ထို
ရွာကလေး၏ တစ်ခုတည်းသော ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်သွယ်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းနောက်တော့ ရွာသားတွေဟာ ကျောက်ဆောင်ကျောက်စွန်းတွေကိုဖြတ်ပြီး ဥမင်လှိုင်ခေါင်းတူးကာလမ်း
ဖောက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ လိုက်ကြပါတယ်...
( နောင်လာနောက်သားမျိူးဆက်သစ်များအတွက် ကြီးမားတဲ့ ပေးဆပ်မှုကြီးပါပဲ...)
ရွာအကြီးအကဲ ရှန်းမင်ရှင်း ဦးဆောင်ပြီး ရွာသားတွေဟာ လမ်းဖောက်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်မယ့် တူတွေ၊ သံ
တူရွင်းတွေ စတဲ့ သံထည်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ အတွက် ပိုင်ဆိုင်သည့် ဆိတ်များ၊ သီးနှံများကိုရောင်းချခဲ့ကြ
ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ရွာသား ဆယ့် သုံးဦးကနေ ထိုဥမင်လမ်းဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့ ကြတာဖြစ်
ပြီး အမြင့်၅ မီတာ ( ၁၆ ပေခွဲခန့် ) ၊ အကျယ် ၄ မီတာ ( ၁၃ ပေ ) ၊ အရှည် မီတာ ၁၂၀၀ ( ပေပေါင်း ၃၉၃၇ ပေ) ရှိတဲ့ လမ်းကို ငါးနှစ်ကြာ ဖောက်လုပ်ခဲ့ ကြရပါတယ်...
လမ်းဖောက်လုပ်စဉ်ကာလအတွင်း အချိူ့ သောရွာသားများဟာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ ကြရပါတယ်...
၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့ မှာတော့ ထိုဥမင်လှိုင်ခေါင်းကို သွားလာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ ပါ
အများအကျိူးအတွက် ဇွဲလုံ့ လ၊ ၀ီရိယကြီးစွာနဲ့ ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ တရုတ်ကျေး
ရွာလေးတစ်ရွာမှ ရွာသားများကို လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်...
ဘယ်သူမှမလုပ်ပေးချင်နေ ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ဖန်တီးယူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အားကျအတုယူကြရမှာ
အဆိုပါလမ်းကို အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှာ ဘိုလီဗီးယားနိုင်ငံမှ လမ်းဆိုပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြထားတတ်
Led by Shen Mingxin, head of the village, they sold goats and herbs to buy hammers
and steel tools. Thirteen strong villagers began the project. It took them five years to finish the 1,200-metre-long tunnel which is about5meters high and4meters wide. Some of the villagers even gave their lives to it. On May 1, 1977, the tunnel was opened to traffic."
Posted by Unknown | at 1:20 AM |4comments
No to 'virginity tests' for schoolgirls
သူ့ ကျောင်းစည်းကမ်းကလည်း အပျိူစစ်မစစ် အရင်စမ်းသပ်ခံရမတဲ့ ...ဆိုးပါ့ ဗျာ...
ကမ္ဘာ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူဦးရေးအများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မှလွှတ်တော်ကိုယ်စား
လှယ်ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးက အစိုးရကဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ ထားသည့် အထက်တန်းကျောင်းများသို့ 
တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူများအား ကျောင်းမှလက်မခံမှီ အပျိူစင်ဖြစ်မဖြစ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးကာ စမ်း
သပ်မှုအောင်မြင်မှ ကျောင်းဝင်ခွင့် ပေးမည်ဟူသော ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ၊ အတည်ပြုဖွယ်ရာမရှိသည့် ဟာသ
မြောက်သည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေတစ်ရပ် ၎င်း၏ပြည်နယ်တွင် ပြဌားရန်ဆန္ဒရှိနေခဲ့ ပါတယ်...
ဂျမ်ဘီပြည်နယ်၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ဥပဒေပြုအမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဘမ်ဘန်ဘာယူဆူစီနို က ဆယ်ကျော်သက်အ
ရွယ် လူငယ်များအကြား လက်မထပ်ပဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းများ တိုးတက်များပြားလာခြင်းကြောင့် ယခုလို စည်း
မျဉ်းဥပဒေတစ်ခု အလျင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ အကြောင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ယခုကဲ့ သို့ မဖြစ်မနေအပျိူစစ်မစစ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဟာ လူမျိူးရေး၊ ဘာသာရေးအရခွဲခြား
ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သလို၊ လူ့ အခွင့် အရေးကိုလည်း ချိူးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 
" ယခုကဲ့သို့ သော ( လူငယ်များ လက်မထပ်မီလိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်မှုများပြားလာခြင်း ) ပြဿနာများကိုဖြေ
ရှင်းနည်းကတော့ လိင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာကာကွယ်ရေး
အမျိူးသားကော်မရှင် အကြီးအကဲ ဆီတိုမူလ်ယာဒီ ကပြောဆိုလိုက်ပြီး ယခုဖြစ်ရပ်များမှာ မိန်းကလေးအများ
စုက ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန် လိုလိုလားလားမရှိခဲ့ ကြပါဘူးလို့ ထပ်မံရှင်းပြပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" လိင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးအစီအစဉ်ကို ကျောင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ သာထည့် သွင်းသင်ကြားပေးလိုက်
ပါ....ဒီလိုဆိုကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်၎င်းတို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာသိ
ရှိနားလည်သွားပါလိမ့် မယ်...ဒါပေမယ့် အပျိူစစ်မစစ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာကြီးကတော့ ( သဘာဝ
မကျလှပါဘူး...) ..." လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ အတင်းအကြပ်ပြဌာန်းခြင်းမရှိတဲ့ မွတ်စလင်ဦးရေ သန်း
၂၁၀ မျှရှိသည့် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေအများဆုံးမွတ်ဆလင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်...
အများစုဟာ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာမှာ သဘောထားပျော့ ပြောင်းသည့်အလယ်အလတ်ဝါဒီများဖြစ်ပေမယ့် ရှေး
ရိုးဆန်သူ တစ်ချိူ့ ကတော့ အလျင်အမြန်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ ခေတ်မှီယဉ်ကျေးမှု၊ နည်း
ပညာတွေက ကိုယ်ကျင့် တရားတွေကို ပျက်သုန်းစေနေတယ်လို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်...
လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်စာပေ၊ မီဒီယာတွေကို အလွယ်တကူရရှိနေနိုင်မှုများနှင့် ဘာသာရေး
ဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတချိူ့ တဲ့ မှုများက လူငယ်တွေကို အချိန်မတန်မှီ လိင်မှုကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်စား
စေ၊ ပါဝင်ပါတ်သက်စေတာဖြစ်တယ်လို့အမတ်မင်း ဆူစီနို ကဆိုခဲ့ ပါတယ်....
အဆိုပါ ၎င်း၏အဆိုပြုချက်ကို အတည်ပြုဖို့ ဂျမ်ဘီပြည်နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှုးရဲ့ ထောက်ခံမှု လိုအပ်ပြီး ပြည်
နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးကတော့ ၎င်း၏အဆိုပြုတင်ပြချက်ကို အမျိူးသမီးရေးရာဝန်ကြီးနှင့်အတူ ချက်ချင်းပဲပြစ်
တင်ရှုံ့ ချခဲ့ ပါတယ်....
သူပြောတဲ့ အကြောင်းရင်းအချက်အလက်တွေမှန်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပေမယ့်လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မမှန်
ဒီကိစ္စဟာ ရွှေပြည်ကြီးမှာလည်း အလေးအနက်ထားစဉ်းစားဆွေးနွေးသင့် တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ...
ကျွန်တော်တို့ ကိုးတန်း၊ဆယ်တန်းအထိ ဘာဆိုဘာမှမသိနားမလည်ခဲ့ တဲ့ကိစ္စအကြောင်းအ၇ာတွေကို
ယနေ့ လူပျိူအပျိူမဖြစ်သေးတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ပြုလုပ်နေကြတာဟာ တစ်ကယ်တော့ အထက်က အမတ်
မင်းပြောခဲ့ သလို ညစ်ညမ်းဗီဒီယို၊ စာပေတွေ အလွယ်တကူရရှိနေတာ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရုပ်ရှင်မီဒီယာတွေ
မှာ ထိုကိစ္စများကို အသားပေးဖေါ်ပြနေတာ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတခေါင်းပါးတာ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဗဟု
သုတအသိဥာဏ်နည်းပါးတာတွေကြောင့် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ...
Posted by Unknown | at 8:12 AM | 1 comments
Labels: news: AP
ထူးပါပေ့ ဆန်းပါပေ့ ...ပေါက်ဖေါ်ကြီးရယ်...
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိူးသားတစ်ဦးက ၎င်းအနေနှင့် အထူးအဆန်းအံ့ သြဘနန်းပြကွက်များ တစ်ဦးတည်းအ
များဆုံးလုပ်ပြနိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ အထူးဆန်းဆုံး စတန့် လူသားအဖြင့်စံချိန်တင်နိုင်လိမ့် မည်ဟု မျှော်လင့် ယုံ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ပိုင်း ကွေ့ ကျိူးပြည်နယ် မှ ယန်ဂွမ်ဟီး က၎င်းအနေနှင့် စတန့် စွန့် စားခန်းပြ
ကွက်ပေါင်း ၃၀ ကျော် တစ်ဦးတည်းပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ထိုသို့ သက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်သူဟာ ဟူနန်ပြည်နယ်မြို့ တော် ချန်ရှားမှာ အဆိုပါပြကွက်များကို တစ်
ကိုယ်တော်ပြသပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ မီးသီးများပေါ်မှာလမ်းလျှာက်ပြခြင်း၊ မျက်ခွံများပေါ်တွင် သံချိတ်များချိတ်ကာ ရေပုံးများကို မပြခြင်း၊
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးဒရေးလ်စက် ( အပေါက်ဖေါက်၊၀က်အူရစ်စက် ) ကိုဖွင့် ပြီးနှာခေါင်းအတွင်း ထည့် သွင်း
လှည့် ပြခြင်း၊ ပက်လက်ထောင်ထားသည့် ဓါးသွားများပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်ပြခြင်း၊ မျက်ခွံများဖြင့် ကားတစ်
စင်းကို ဆွဲပြခြင်းများကို လူအများအားပြုလုပ်ပြသခဲ့ ပါတယ်....
၎င်းနောက်သူဟာ မြွေအရှင်တစ်ကောင်ကို နှာခေါင်းထဲထည့် ပြီး ပါးစပ်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးပြခဲ့ လို့ လည်း
ကြည့် ရှုသူလူအများ အံ့ သြထိတ်လန့် ခဲ့ ကြရပါသေးတယ်...
ဓါတ်တူနံတူ ဆိုသလိုပါပဲ...၎င်းရဲ့ ချစ်သူရည်းစား အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ၀မ်မေ အမည်ရှိမိန်းကလေးက
လည်း သူမရဲ့ လည်ပင်းမှာထောက်ထားတဲ့ ဓါးတစ်ချောင်းကို ချည်ထားတဲ့ ကြိုးနှင့် ကားတစ်စီးကို ဆွဲပြခဲ့ 
A Chinese man is hoping to get into the record books for being the world's most versatile performer of bizarre stunts.
Yang Guanghe, of southwest China's Guizhou Province, says he can perform more than 30 different stunts.
And to prove it, he performed them all duringaone man show in Changsha, capital city of Hunan Province.
People watched him stand on lit lightbulbs, use hooks hanging from his eyelids to lift buckets of water, use an electric drill on his nose, stand on upturned knives and pullacar with his eyelids.
He also shocked his audience by insertingalive snake into one of his nostrils and pulling it out from his mouth.
And, to prove there really is somebody for everybody, his girlfriend Wang Mei, 22, then pulledacar witharope fastened toaknife pressed against her throat.
Posted by Unknown | at 8:08 AM |2comments
Caught While SneakingaPeak
မင်းအကြည့် တွေ....တို့ သိနေတယ်...
အိနြေ္ဒရှင် မမများလည်း ဒီလိုမျိူးအကြည့် ရိုင်းတွေမလိုချင်ယင် ကိုယ့် ကိုယ်ကို သတိထားနိုင်ဖို့ သင်ခန်းစာ
ပဲပေါ့ ....ကျားဆိုတာကတော့ အများစုက ပြယင်၊ ပြသလိုဝတ်စားထားယင် ကြည့် မိကြမှာပါပဲ...
တွေ့ ရတာ အရမ်းအရမ်းကို ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ...
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းတောင် ချမ်းသာမပေးဘူး...လူဆိုး...
နောက်ကွယ်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုက အံ့ မခန်းလောက်စရာများဖြစ်နေလို့ လားပဲ...
ကောင်လေးတွေ ကျောင်းစာကျ စိတ်မ၀င်စားဘူး...
ငယ်ကတည်းက " ဇ " နဲ့ ဗျ....
( ခွက်ထဲမှာ )နို့ ရှိလားလို့ ကြည့် နေတာပါ.....
ကောင်လေး...မင်းအကြည့် တွေ တို့ သိနေတယ်...
ဘရုစ်ဝီလီ လည်း ကျားပါပဲ...
ဒါကတော့ ကမ္ဘာကျော် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ဂလု မိတာလူသိခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်....
Posted by Unknown | at 2:29 AM |3comments
Woman’s kidney pulled out of her vagina
ဒီကျောက်ကပ်ကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ....အနီးဆုံးထွက်ပေါက်ကနေ ခွဲထုတ်ခဲ့ လိုက်ရတယ်ပေါ့ ....
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အလွန်အမင်းဝနေသည့် ( အ၀လွန်ရောဂါသည် ) အမျိူးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ
၏ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များသမိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် သူမရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို မွေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် 
ဆွဲယူခွဲစိတ် ဖြတ်ထုတ်ခံခဲ့ ရပါတယ်....
အဆိုပါအမျိူးသမီးကြီးဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၈.၅ စတုံ ( ပေါင် ၂၆၀ ခန့် ) ရှိပြီး ရောဂါပိုးများကူးစက်သည့်
အတွက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသွားခဲ့ ရပါတယ်...
ထို့ အတွက်ခွဲစိတ်ဆ၇ာဝန်များက သူမရဲ့ ကျောက်ကပ်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် အ၀လွန်ပြီး အဆီတွေ
ပြည့် နေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကိုခွဲစိတ်မယ်ဆိုလျှင် အလွန်အန္တရယ်များမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
ဒါကြောင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံလိုင်ယွန်မြို့ ရှိဆေးရုံမှ ဆ၇ာဝန်များက အဆိုပါပျက်စီးနေတဲ့ ကျောက်ကပ်ကို သူ
မရဲ့ လိင်အင်္ဂါမှတစ်ဆင့် ခွဲစိတ်ထုတ်ယူဖို့သမားရိုးကျအတွေးအခေါ်များမှခွဲထွက်ပြီးဆန်းသစ်တဲ့ အတွေး
အခေါ်များနှင့် ( တော်လှန်တဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆများနှင့် )ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ ကြပါတယ်...
" ယခုလိုအဓိကကျတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် အဆိုပါအမျိူးသမီးအနေနှင့် နာ
ကျင်မှုကိုလျော့ နည်းခံစားရတဲ့ အပြင် (၀မ်းဗိုက်ကို ) ခွဲစိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဆိုးကျိူးများကိုလည်း
ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ ပြီး ခွဲစိတ်ဒါဏ်ရာကလည်း ပိုမိုသေးငယ်ပါတယ်..." လို့ ဆေးရုံရဲ့ ပြောဆိုခွင့် ပုဂ္ဂိုလ်က ပြော
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
A morbidly obese woman in France has hadakidney pulled from her vagina inamedical first for French surgeons.
The massive woman is reported to weigh over 18.5 stone and suffered kidney failure due to multiple infections. Surgeons needed to remove the organ but decided that cutting through the layers of fat was too risky.
So doctors at the hospital in Lyon came up with the revolutionary idea of removing the woman’s kidney through her vagina.
“The vaginal route allows us to reduce the pain and the risk of complications, as the cut is much smaller,”aspokesperson for the hospital said.
Labels: news: internet
အိန္ဒိယက ဇတ်နိမ့် ဇတ်မြင့် ပြဿနာ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များဟာ ဇတ်မြင့် သည့်လူများပိုင်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ကို အစာကျွေးမိသည့် ဇတ်
နိမ့် ဒါလစ် အနွယ်ဝင်အမျိူးသမီးတစ်ဦးအား ထိုသို့ ပြုမိသည့် အတွက် လျော်ကြေးငွေပေးဆောင်စေဖို့ စေ
ခိုင်းခဲ့ သည်ဟုဆိုသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးလျှက်ရှိပါတယ်...
ကျေးရွာကောင်စီလူကြီးများက ဇတ်မြင့် များပိုင်သည့် ခွေးကို အစာကျွေးခဲ့ မှုကြောင့် ထိုခွေးကို ပိုင်ရှင်များ
ကမောင်းထုတ်ခဲ့ လိုက်ပြီးနောက် သူမကို လျော်ကြေးငွေ ရူပီး ၁သောင်း ၅ ထောင်ပေးဆောင်စေခဲ့ တယ်
အဆိုပါခွေးဟာသူတို့ အတွက် ( ဇတ်မြင့် ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ) ထိလို့ ကိုင်လို့ မရတော့ ဘူး ( ဇတ်နိမ့် တစ်
ယောက်က ခွေးကိုအစာကျွေး၊ ထိကိုင်ခဲ့ မိလို့ ) လို့ ဆိုခဲ့ ပြီး အခုလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဇတ်အနိမ့် အမြင့် ခွဲ
ခြားမှုကြောင့် မဟုတ်ရပါဘူးလို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ ကြပါတယ်...( ဒါဆိုဘာကြောင့် ပါလဲ...)
ယခုလို ဇတ်အနိမ့် အမြင့် ခွဲခြားမှုဟာ နေရာအနှံ့ အပြားမကြာခဏဖြစ်ပွားနေခဲ့ ပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ
တော့ အဆိုပါ ဒါလစ်ဇတ်နိမ့် များကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဟာ ပြစ်မှု၊ ဥပဒေကျူးလွန်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ 
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မတ္တရာပရာဒေ့ ရ်ှပြည်နယ် အလယ်ပိုင်း၊ မိုရီနာ ဒေသရှိ မာလီပူရ်
ရွာကလေးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်မက ရိုတီပလာတာတစ်ချိူ့ ပြုလုပ်ချက်ပြုတ်ပြီး လယ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူထံကို
သွားပို့ ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ ဒါလစ်ဇတ်နိမ့် အမျိူးသမီး ဆူနီတာဂျာတက်ဗ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" သူအလွန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်သွားပြီးနောက် နင်ကငါ့ ခွေးကိုအစာကျွေးခဲ့ လို့ အခုတော့ ဒီခွေးကို ငါတို့ 
ထိလို့ မရတော့ ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ အမ်ရူတယ်လ်ကီရာရီ က သူမခွေးကိုအစာကျွေးနေခဲ့ တာကိုမြင်တွေ့ ခဲ့ ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ 
ခွေးအစာကျွေးမိလို့ ခွေးပါဇတ်နိမ့် သွားခဲ့ ရပါတယ်တဲ့ ...
မစ္စတာကီရာရီ ဟာ ရှီရူးလို့ အမည်ရှိတဲ့ မွန်ဂရယ်မျိူး ခွေးကိုသူမရဲ့ အိမ်အပြင်က တိုင်တစ်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ 
ချီထားပြီး စွန့် ပစ်ထားခဲ့ ပါတယ် လို့ မစ္စက်ဂျတက်ဗ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့ တနင်္လာနေ့ မှာတော့ ကျေးရွာကောင်စီလူကြီးများဟာ စုဝေးတိုင်ပင်ကြပြီး ခွေးရှီရူး ဟာဇတ်ပျက်
သွားပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီး ပိုင်ရှင် မစ္စတာကီရာရီ အနေနှင့် လျော်ကြေးငွေ ရူပီး ၁၅၀၀၀ ရထိုက်တယ်လို့ ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့ ကြတယ်လို့ မစ္စက် ဂျတက်ဗ် ကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အင်္ဂါနေ့ မှာတော့ သူမဟာ ခရိုင်အ၇ာရှိဆီကိုသွားရောက်တွေ့ ဆုံတိုင်ကြားခဲ့ လို့ ထိုသူက စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ 
အမိန့် ပေးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုဒေသမှ ရဲအရာရှိကြီး ဘယ်လ်ဒက်ဗ်ဆင်း ကတော့ ၎င်းအနေနှင့် ထိုကိစ္စကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်
လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ခွေးပိုင်ရှင် မစ္စာကီရာရီက သူ့ ခွေးဟာထိုပလာတာ ကိုစားခဲ့ ပြီး နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ တယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆို
ခဲ့ တယ်လို့ ၎င်းရဲအရာရှိကဆိုပါတယ်...
ထို့ နောက်သူဟာ ခွေးကို ထိုအမျိူးသမီးအနေနဲ့ ပြန်လည်နေကောင်းလာအောင်စောင့် ရှောက်နိုင်ဖို့ ထိုအ
မျိူးသမီးရဲ့ အိမ်ရှေ့ မှာသွားရောက်စွန့် ပစ်ထားခဲ့ ပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ဒါလစ်ဇတ်နိမ့် များဟာ ယခင်ကဆိုလျှင် မထိရ၊ မကိုင်ရသည့် အထိခွဲခြားဆက်ဆံခံ
ကြရတဲ့ အနိမ့် ဆုံးဇတ်နိမ့် များဖြစ်ပါတယ်....
အဆိုပါဒါလစ်များဟာအိန္ဒိယနိုင် လူဦးရေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုံးရှိပြီး အစိုးရအနေနှင့် ဇတ်အနိမ့် အမြင့် ခွဲခြားဆက်
ဆံခြင်းကိုတားမြစ်သည့် ဥပေဒအမျိူးမျိူးထုတ်ပြန်ခဲ့ ပေမယ့် အခြေအနေကတော့ ထူးထူးခြားခြားတိုးတက်
ဥပဒေအရတော့ ဇတ်အနိမ့် အမြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဟာ ဥပဒေကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပြီး အပြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့ 
ဇတ်နိမ့် နဲ့ ဇတ်မြင့် လူငယ်လေးတွေ၊ အမျိူးသားအမျိူးသမီးတွေ ချစ်ကြ၊ ကြိုက်ကြ၊ ယူကြလို့ ရွာသူရွာသား
တွေက၀ိုင်းဝန်းပြီး အပြစ်ပေးကြ၊ သတ်ကြဖြတ်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်...
နီပေါမှာလည်း ထိုသို့ ဇတ်အနိမ့်အမြင့် ခွဲတာရှိပါသေးတယ်...
ယခင်ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဆိုလျှင် ဇတ်နိမ့် ဖြစ်လို့ သူတို့ နီပေါနိုင်ငံသားအချင်းချင်းပင် သိပ်
သူလည်း အဲဒါကြောင့် ထင်ပါတယ်...ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲဝင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
The woman says the village council wants her to payafine of 15,000 rupees ($330) for feeding the dog, which the owners have now kicked out. They are reported to have said the dog is "untouchable", but deny being motivated by caste considerations. Although widespread, discrimination against Dalits is an offence in India.
Mr Kirari said he abandoned the dog at Mrs Jatav's house so she could look after it and nurse it back to health, Mr Singh added. Dalits - formerly untouchables - are considered at the bottom of the Hindu caste system. Dalits, who make up nearly 20% of the Indian population, say little has changed despite the government enacting various laws banning caste-based discrimination. Any discrimination against them is an offence and punishable by law.
Posted by Unknown | at 5:06 AM |0comments
Baby-sitting in european parliament
လွှတ်တော်ထဲတွင် ကလေးထ်ိန်းခွင့် ပြုမည့် ဥရောပပါလီမန်...
အီတလီနိုင်ငံမှ ဥရောပပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ် လီစီယာရွှန်ဇယ်လီ သူမ၏သမီးငယ်ဗစ်တိုရီးယား
အားချီပိုးလျှက် စထရားဘိုး မြို့ တွင်ကျင်းပသည့် ဥရောပ ပါလီမန်အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်
မစ္စက်ရွှန်ဇယ်လီဟာ အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ရင်သွေးငယ်များအား လုပ်ငန်းခွင်သို့ ခေါ်ဆောင်
လာနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဆိုသော စည်းမျဉ်းဥပဒေကို အခွင့် ယူအသုံးချပြီး ယခုကဲ့ သို့ သူမ၏ရင်သွေးငယ်သမီး
လေးအား ပါလီမန်အစည်းအဝေးသို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ သည်ဟု သတင်းများကဆိုပါတယ်...
နိုင်ငံရေးလောကထဲသို့ မ၀င်ခင် ယခင်က အီတလီနိုင်ငံ၊ မီလန်မြို့ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံများတွင်အလုပ်
လုပ်ခဲ့ သည့် သူနာပြုမယ်ဟောင်းဟာ အီတလီဝန်ကြီးချူပ် ဆီလ်ဗီယိုဘာလုစ်ကိုနီရဲ့ ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်
မစ္စက်ရွှန်ဇယ်လီ နှင့် သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရီနာတိုစီရီအိုလီတို့ ဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ မင်္ဂလာ
ပွဲသို့ တက်ရောက်ချီးမြင့် ခဲ့ သည့် ဝန်ကြီးချူပ်ဘာလုစ်ကိုနီနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြပါ
သူတို့ ဆီမှာတော့ သားသည်အမေများလည်း လွှတ်တော်အမတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ ...
Italy’s Member of the European Parliament Licia Ronzulli takes part with her baby Victoria, born on August 10, inavoting session at the European Parliament in Strasbourg on Wednesday.
Mrs Ronzulli was taking advantage of rules that allow women to take their children to workplaces, reports said.
The former nurse who has worked in Milan and Bangladesh before turning to politics, isamember of Italian Prime Minister Silvio Berlusconi’s People of Freedom Party.
Mrs Ronzulli and her husband Renato Cerioli, alsoapotitician, are close friends of Berlusconi, who had reportedly attended the couple’s wedding. — Reuters
Posted by Unknown | at 4:11 AM |0comments
Chain-smoking whisky drinker marks 100th birthday
ဘိုးဘိုး အာသာလန်ဂရန် ကတော့ သူ့ ရဲ့ အသက် ၁၀၀ ပြည့် မွေးနေ့ ကို အရက်အပြင်းစားနဲ့ 
Arthur Langran celebrated his 100th birthday drinking pints of ale with his family and friends
တစ်သက်လုံး မနားတမ်းဆေးလိပ်သောက်သုံးခဲ့ သည့် အဘိုးတစ်ဦးကတော့ တစ်သက်တာ ဆေးလိပ်ပေါင်း
၃ သိန်းနီးပါး ဖွာရှိုက်ခဲ့ ပြီးနောက် အသက် ၁၀၀ ပြည့် မြောက်ခဲ့ ပြီဖြစ်ပါတယ်...
ဘ၀မှာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေထိုင်ခဲ့ သည့် အဘိုး အာသာလန်ဂရန် ဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်ကတည်းက
စလို့ တစ်နေ့ လျှင် စီးကရက် ၁၀ လိပ် အနည်းဆုံးသောက်သုံးခဲ့ ပါတယ်...
သားသမီးနှစ်ယောက် ဖခင်အဘိုးဟာ စကော့ ဝီစကီအရက် ကိုလည်း အိပ်ယာမ၀င်မှီ ညတိုင်းမပျက်မကွက်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဆပ်ဖို့ နယ်၊ ဘာရီစိန့် အက်မွန့် စ် အရပ်က အဘိုးအာသာဟာ ၎င်းရဲ့ အသက် ၁၀၀ ပြည့် 
မွေးနေ့ ကို ထိုဒေသက ဟင်တဲလ်စ်ရှန် မှာ သားအငယ်ဆုံးဖြစ်သူ အသက် ၅၇ နှစ်ရှိ မစ္စတာဂျွန် ဖွင့် လှစ်
ထားတဲ့The George အမည်ရှိ အရက်ဘားတစ်ခုမှာ လွန်ခဲ့ တဲ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ က မိသားစု
၀င်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူ ဘီယာအပြင်းစားသောက်ပြီး ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်...
" အဘိုးရဲ့ ( အသက်ရှည်ရခြင်း ) လျှိူ့ ဝှက်ချက်ကတော့ မလုပ်နဲ့ လို့ ဆိုတဲ့ အရာတွေ ( မကောင်းတာမှန်
သမျှ ) ကို လုပ်တာပါပဲ..." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" အဘိုးက အသက် ၂၀ ကတည်းကဆေးလိပ်စသောက်ခဲ့ ပြီး အခုအထိလည်းကြိုက်တုံးပါပဲ...ဆေးတံလည်း
သတင်းစာဖတ်တာလည်းနှစ်သက်ပြီး စကားလုံးပဟေဠိ ဖြေရတာလည်းဝါသနာပါတယ်...ပြီးတော့ သားအ
ငယ်ဆုံး ဂျွန်ကိုလည်း ကူညီပါတယ်....( သူကအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုး...) " လို့ အဘိုးကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဘ၀ဟာ သာယာချမ်းမြေ့ ပါတယ်...ဘုရင်မကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့် ထင်ပါရဲ့ ...
Arthur puffing away while holdingaportrait of the Queen
အဘိုးရဲ့ သားအကြီးဆုံးဖြစ်သူ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ပီတာကတော့ ဆရာဝန်တွေက သူ့ ရဲ့ ဖခင်ကိုဆေး
လိပ်ဆက်သောက်ဖို့ ပြောခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" အဖေက သူအသက် ၂၀ ကတည်းကဆေးလိပ် သောက်လားခဲ့ ပြီး အခုတော့ ဆေးတံသောက်တာသိပ်မ
ကြာသေးဘူး..." လို့ ထပ်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" အဖေဟာ သူကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်တွေကိုတစ်နေ့ ငါးလိပ်ခြောက်လိပ်လောက်လိပ်ပြီးသောက်လေ့ ရှိပါ
တယ်...နောက်တော့ အရေအတွက်ပိုများလာလို့ နံနက်တစ်ခါ၊ နေ့ လည်တစ်ခါ ဆေးတံသောက်ပါသေး
တယ်...ညတိုင်းလည်း ၀ီစကီလေးကြိတ်ပါသေးတယ်...အခုလိုလုပ်နေခဲ့ တာ အသက်ကြီးလာမှပဲဖြစ်ပါ
အဖေ့ ရဲ့ ဘ၀က ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်...သူဟာမိဘမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ရပြီး ကနေဒါမှာ အတော့ ကိုဆင်းဆင်းရဲရဲပင်
ပင်ပန်းပန်းနေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ ရပြီး စစ်အတွင်းတုံးကလည်း ဗုံးပေါက်ကွဲခံခဲ့ရပါသေးတယ်...
ဆရာဝန်တွေကတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာကို ၇ပ်ပစ်လည်းအကျိူးမထူးတော့ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
ဒီလောက်ဆေးလိပ်တွေသောက်ခဲ့ တာတောင်မှ သူဟာကျန်းမာနေဆဲ၊ သွားသွားလာလာနေနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီး
သူဆန္ဒရှိတိုင်း အပေါ်ထပ်ကိုတောင် သူ့ ဘာသာတက်သွားလေ့ ရှိပါတယ်..." လို့ ဆက်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အဘိုးအာသာကို မိဖမဲ့ ၊ ပြုစုစောင့် ရှောက်မဲ့ သူအဖြစ်မွေးခဲ့ ပြီးကနေဒါ ကို အမျိူးသားကလေးသူငယ်များ
ဂေ ဟာမှပို့ လွှတ်ခဲ့ လိုက်ပြီး သူ့ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ကစပြီး လယ်ထဲမှာလုပ်သားအဖြစ် စတင်အလုပ်
သူ့ အသက် ၃၀ အရွယ် ၁၉၄၀ မှာ ဗြိတိန်္ဘကိုပြန်လာခဲ့ ပြီး စစ်ထဲဝင်ကာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲအတွင်း ဟစ်တ
လာနဲ့ နာဇီတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ ပါတယ်...
ထိုကာလမှာပဲ ဆပ်ဖို့ တပ်၇င်းကို ၀င်ေ၇ာက်ဖို့ စာ၇င်းပေးသွင်းခဲ့ ပြီး သူ့ ဘ၀ရဲ့ ပထမဦးဆုံး စီးကရက် ကို
အဘိုးဟာ ဇနီးဖြစ်သူ အိုင်ဗီ နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ ပြီး အဘွားကတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီအဘိုးကိုအတုယူပြီးတော့ လိုက်မသောက်လေနဲ့ နော်...
သူကတော့ သူ့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့ စည်းပုံက သန်မာလို့ အသက် ၁၀၀အထိနေနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့် အလှည့် ကျ
မှ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေသွားနိုင်ပါတယ်...
A lifelong chain-smoker has celebrated reaching his 100th birthday - despite puffing his way through nearly 300,000 fags.
Hard-living Arthur Langran has smoked at least 10 cigarettesaday since the age of 20.The father-of-two also religiously drinksadram of Macallan single malt Scotch whiskey every evening before getting into bed.
Arthur, of Bury St Edmunds, Suffolk, in Britain celebrated his 100th birthday drinking pints of ale with his family and friends at his local pub - The George - in Hintlesham, Suffolk, which is run by his youngest son John, 57 on Sept 8.
He said: "I always say the secret is doing things you’re not told to do."
"I have been smoking since I was 20 and I still enjoy it, andapipe. I haveawhiskey every night."
"I also like reading the papers and doing crosswords with the help of my son John."
Arthur’s eldest son Peter, 62, revealed that doctors have told his father to keep smoking.
He added: "Dad has smoked roll-ups since he was 20-years-old and more recently usedapipe."
"These days he rolls himself five or sixaday but used to smoke more and has his pipe once in the morning and once in the afternoon."
"He hasasmall single malt whiskey every night. He’s been doing that ever since he was elderly."
"He’s hadatough old life. He was an orphan, hadaterrible time living and working in Canada and was blown up byagrenade in the war."
"The doctor has said its not worth getting him to give up the cigarettes. He’s still in good health despite the smoking and still mobile and gets up stairs whenever he wants."Arthur was born an orphan and sent to Canada by National Children Homes when he was just 14 years old to work asafarmhand.He returned to Britain in 1940 when he was 30-years-old so he could join the Army and fight Hitler and the Nazis in the Second World War.It was also the same year that he smoked his first cigarette, shortly after signing up with the Suffolk Regiment.
He was married to Ivy who sadly died in 2000.
Posted by Unknown | at 1:29 AM |2comments
Labels: news: swns.com
World's tallest, coldest and greenest hotels
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး၊ အအေးဆုံး၊ စိမ်းစိုလန်းဆန်းဆုံး....စသည့် ဟိုတယ်များ....
မြန်မာပြန်ဆိုဖော်ပြဖို့ scheduled လုပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်...
လွန်ခဲ့သည့် ရက်များက အင်တာနက်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ လို့ မေးလ်လည်းမစစ်နိုင်၊ ဘလော့ ဂ်ဂင်းလည်း
မလုပ်နိုင်လို့ အလိုလိုပို့ စ် အဖြစ်တက်သွားခဲ့ ပါတယ်...
အင်တာနက်ဖတ်ရှုသုံးစွဲသူအများစု ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိသူတွေချည်းပဲမို့ ဒီအတိုင်းလည်းနားလည်
နိုင်တာမို့ ထပ်မံဘာသာမပြန်တော့ ပါဘူး...
တစ်ချိူ့ ဟိုတယ်တွေကတော့ သူတို့ ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေထက်ပိုသည့် ဟိုတယ်အသစ်များပေါ်ပေါက်လာတာ
မို့ ထိုဘွဲ့ ထူးများမှ လျောကျသွားခဲ့ ကြရပါပြီ...
ဥပမာ ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးဟိုတယ်ဆိုယင် ဒူဘိုင်းမှာပဲ Rotana ဟိုတယ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာခဲ့ သလို ကမ္ဘာ့ ငွေ
ကုန်ကျေးကျအများဆုံး အကုန်ခံပြီးဆောက်ခဲ့ တဲ့ ဟိုတယ်ဆိုယင်လည်း လက်ရှိ အဘူဒါဘီက Emirates
Palace ဟိုတယ်ထက် အခုနောက်ဆုံးဖွင့် လှစ်လိုက်တဲ့စင်္ကာပူက Marina Hotel က ပိုပြီး အကုန်အကျ
စင်္ကာပူဟိုတယ်ကြီးရဲ့ အမြင့် ဆုံးရေကူးကန်ကတော့ မကြာသေးခင်ကပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကျော် ရေ
အိတ်သဲအိတ်ပိုင်ရှင်စီလီကွန်ရေကူးမော်ဒယ်လေးကြောင့် အစ်ကိုကာလသားများ ပိုသိသွားခဲ့ ကြရပါ
For travellers who likeahotel withasuperlative attached, here'salist of record-breaking hotels.
When the sun sets, the Burj Al Arab's facade is lit up to look likeagrand sail.
An aerial view of the Las Vegas Strip including (L-R) the Wynn Las Vegas, The Palazzo, the Treasure Island Hotel & Casino and The Venetian in Las Vegas. The Palazzo is the world's largest hotel, by number of rooms. [Photo: AFP]
Where else would you expect to find the world’s largest hotel? The Palazzo Resort Hotel & Casino operates under the same licence as The Venetian hotel next door and has 8,108 rooms combined. The hotel is likeamini city, withalarge selection of restaurants, fashion stores (including its own version of Barneys New York) and, of course, its own casino with more than 139 gaming tables and 1,400 gambling machines. The hotel is home to the Broadway smash musical Jersey Boys, while the widely acclaimed Blue Man Group is also permanently on show. If you want to relax, there is the choice of seven pools and four hot tubs.
The hotel is likeamini city, withalarge selection of restaurants, fashion stores, its own casino, and seven pools.
World's Oldest Hotel: Hoshi Ryokan in Komatsu, Japan. [Photo: Akiyoshi's Room]
World's Most Expensive Hotel Room - The Royal Villa at Grand Resort Lagonissi in Athens, Greece costs US$50,000anight. [Photo: Grand Resort Lagonissi]
The room has all the luxuries you would expect for the price tag such asamarble-lined bathroom, oversized walk-in wardrobe andaprivate terrace. If you findareason for leaving the room, the hotel offersastate-of-the-art spa and 10 restaurants, many of which have been awarded the five-star diamond award. The resort also hasaprivate Lear jet to fly guests around the Greek Islands. Can’t run to £30,5000? Beachfront bungalow rooms at the resort start atamere £558 per night.
World's Most Expensive Hotel to Build: Emirates Palace - Abu Dhabi [Photo: Abu Dhabi Tourism Authority]
All of the 394 rooms are decorated with acres of gold leaf and marble and come complete withaprivate butler service. The hotel has two large pools, one of which is equipped withawaterslide, waterfalls andalazy river.
Paris Hilton arrives at the Grand Hills Hotel in Brummana, Lebanon. The Royal Suite in the Grand Hills Hotel & Spa is the world's largest hotel room, set over six floors foratotal 8,000 square meters. [Photo: AFP]
Icehotel, Jukkasjärvi, Sweden (www.icehotel.com; doubles from £195 per room per night).
The Icehotel has rooms built entirely from ice and snow guests at the Icehotel can chill out in temperatures between 23F (-5C) and 17F (-8C) , decorated with handcrafted ice art and sculptures, an ice chapel licensed for marriages and baptisms, and two restaurants servingarange of Lappish and Swedish dishes.
The two restaurants and the Absolut Icebar offers designer cocktails served, naturally, from ice glasses. Activities include snowmobile excursions, northern lights tours, snowshoe and cross-country ski excursions and dogsled and reindeer tours
World's Highest Hotel (floor height): Park Hyatt - Shanghai, China [Photo: Hyatt]
World's Most Eco-Friendly Hotel: Daintree Eco Lodge & Spa - Queensland, Australia [Photo: Daintree Eco Lodge]
Forest accommodation inafairytale mountain
Posted by Unknown | at 11:20 AM |0comments
Labels: photo news : daily telegraph
လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် က လီလျုချွန်း တစ်ယောက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီနန်ပြည်နယ်ရှိ ၎င်း၏ရွာအနီး
တောင်ကုန်းတစ်ခုအပေါ်သို့ တက်ရောက်နေစဉ် အဆိပ်ပြင်းသည့် ကင်းမြီးကောက်တစ်ကောင် အကိုက်ခံ
ခဲ့ ရ ( အမှန်တော့ အမြီးနဲ့ အထိုးခံရ ) ပါတယ်...
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ ရတဲ့ လီဟာ ထိုကင်းမြီးကောက်ကို ကောက်ယူပြီး အငြိုးတစ်ကြီးနဲ့ ဝါးစားပစ်လိုက်ပါ
ထိုစဉ်က စပြီး လီတစ်ယောက် ကင်းမြီးကောက်အစိမ်းစားရတာကို တပ်မက်သွားတော့ တာပါပဲ...
" ကျွန်တော်စားခဲ့ တဲ့ ကင်းမြီးကောက်ပေါင်း ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ကိုချီပြီး ရှိနေခဲ့ ပါပြီ ..." လို့ အသက် ၅၈
နှစ် အရွယ်ရှိ လီ ကဆိုပါတယ်...
လီရဲ့ အိမ်မှာ သူဖမ်းဆီးမိရသမျှ ကင်းမြီးကောက်တွေထည့် ဖို့ ကြွေအိုးကြီးတစ်လုံး ရှိနေပါတယ်...
" စားချင်စိတ်ပေါ်လာတိုင်း အဲဒီအိုးထဲ လက်နှိုက်ပြီး ပါးစပ်ထဲပစ်ထည့်ကာ စားလိုက်တာပါပဲ...
အဲဒီ ( ကင်းမြီးကောက်တွေကိုအစိမ်းလိုက်စားရတာ ) ကင်းမြီးကောက်တွေက အနံ့ အ၇သာကလည်း
ကောင်းပြီး ပဲကြော်နဲ့ တောင် အရသာခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်..." လို့ သူက ပြောပါတယ်...
ကင်းမြီးကောက်များကို ပါးစပ်ထဲထည့် စားနေစဉ်မှာ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ ပါးစပ်ကိုအမြီးနဲ့ ထိုးတတ်ပေမယ့် 
ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲ သူ့ ပါးစပ်ယောင်ယမ်းလာပြီး ပျောက်သွားပါတယ်....
" ကျွန်တော်က ကင်းမြီးကောက်အဆိပ်ပြီး နေပါပြီ..." လို့ သူကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ တဲ့ တရုတ်မလေးတစ်ဦးကတော့ ပြောပြခဲ့ ဘူးပါတယ်...
" တို့ မစားတာဆိုလို့ ကောင်းကင်မှာ လေယာဉ်၊ မြေပြင်မှာ ကုတင် ..." တဲ့ ...
Thirty years ago, Li Liuqun was stung byapoisonous scorpion while hiking onahill near his village in Henan, China.
The angry Li picked up the insect and chewed it hard in revenge.
It unintentionally led him to discover his version of an exotic delicacy.
Since then, Li has hadacraving for raw scorpions.
"I think I have eaten tens of thousands of scorpions over the part years," said Li, 58.
Li hasabig porcelain container in his home where he stores all the scorpions he catches from the hill.
"Anytime I feel like eating them, I just grabafew and put into my mouth.
"They haveanice aroma and taste like fried soya beans."
Li said sometimes the insects would sting him in the mouth as he bites through them but added that the swelling only lasted forawhile.
"I'm immune to the poison," he said.
Labels: news: Dahe Bao
sink အစ sink အလယ်...sink အဆုံး...
ကုန်းပိုးတဲ့ ကိုရီးယားတွေ ငိုသွားရလောက်တယ်...
သြော်....ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ပေါ့ နော်...
သမီးက အားလုံးကို လေးစားတာပါ...
သူကမှ စူပါဂဲလ် ပါပဲ...
Posted by Unknown | at 11:59 AM |5comments
အိန္ဒိယက ဇတ်နိမ့် ဇတ်မြင့် ပြဿနာ... အိန္ဒိယနိုင်ငံမ...
အပန်းဖြေစရာဓါတ်ပုံကမ္ဘာ.... နို့ သောက်ချင်ကြသေး...
Putin to marry 24-yr-old gymnast?
'My shame and humiliation': Pope's emotional apolo...
Chinese billionaire to donate all to charity
This'll take care of my five-a-day: Amateur garden...
Beggar found living in 5-star hotel
From the longest tongue to stuffing straws, introd...
Dicing with death: The woman who dares to put her ...
Court orders Buddha Bar closed
From hero to zero: Goalkeeper celebrates saving pe...
Indian tycoon set to be world's richest man
သိပ်လှတဲ့ ပုလိပ် မမ များ... ပြည်သူ့ ရဲထဲ ကျွန်ေ...
Lanka ministers hail new powers for president
Little meets large: World's smallest teenager take...
Amazing Water Fountain of Burj Dubai / Khalifa Lake
First day at school for Britain's only identical q...
Dear Sir, your daughter isahooker
Vicar 'tried to rape schoolgirl in his church hall...
Six-month-old girl givenaPYTHON by her snake-cat...
Introducing the world's shortest man: 27ins tall C...
Groom impales penis on rusty nail on wedding night
Miss Isa Blyth,106, is oldest virg...
China tycoons decline charity invite
The deer who likesabeer
4 killed in fight over 1yuan (45 sen)
Perspectives On University Schoolgirl Prostitution
Russians told to smoke and drink more
Catholic school teacher filmed caning students in ...
Man replaces ex with look-alike sex doll